Dhibaatada Dhaqaale ee Giriig - BBC Somali
Dhibaatada Dhaqaale ee Giriig
Image caption Raiisul Wasaare, George Papandreou
Waddanka Giriig waxaa weli ka socda qilaaf u dhexeeya dowladda, oo qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee xisbiga talada haya iyo mucaaradka sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatada dhaqaale ee ka taagan Giriig.
Raiisul Wasaare, George Papandreou, ayaa waxa uu u baahan yahay cod ku filan si uu uga badbaadi codka kalsoonida ee maanta lagu qaadayo.
Hal mudane oo baarlamaanka ka tirsan ayaa sheegay in uu ka soo horjeedsan doono Raiisul Wasaaraha, sababtoo ah waxay u muuqataa inuu iska dhaafay fikradda ah afrti in loo qaado samatabixinta Midowga Reer Yurub ee Giriig.
Suuqyada Yurub iyo Aasiya ayaa sare u soo kacay markii la sheegay in aftida la iska dhaafay.
Mucaaradka Giriigga ayaa dalbaday in Mr Papandreou uu is casilo isla markaana uu ku dhawaaqo doorasho deg deg ah.